Ifungus kwindawo yokuhlambela
Ukubonakala kwefungus kwindawo yokuhlambela kuyinto engathandekiyo kwimiqondo ye-esesthetic ye-phenomenon, ukuphazamisa ukubonakala kwegumbi. Kodwa kubaluleke ngakumbi ukuba i-mold fungus enkulu ingabangela izifo ezinzulu. Ngoko ke, nokuba amancinci amnyama okanye aluhlaza kufuneka apheliswe ngonya.
Ungasusa njani i-fungus kumakhambi abantu abahlambulukileyo?
Kukho iindlela ezininzi zokufumana i-fungus ngaphandle kwindlu yokuhlambela. Uninzi lwazo lusebenza kakuhle, kwaye ukusetyenziswa kwazo kuyimfuneko ukuthenga okanye ukufumana izindlu ezikhutheleyo kwaye eziyingozi kwimpuphu. Kwintsapho nganye, zokupheka zinikwe iindlela eziphumelele kakhulu zokulahla ubumba .
Eyona nto iyathandwa kakhulu kwaye iphephile kubantu iyisisombululo seviniga, ekufuneka ixutywe ngamanzi, ize isetyenziswe kwendwangu
okanye uthele kwi-spray uze udibanise lo mxube ngefungus. Oku kufuneka kube yiiglavu ezigqokekileyo. Umphumo ombi kuphela wale mphumela kukuvumba okuqhubekayo okuya kuhlala kwindawo yokuhlambela ixesha elithile. Ukusetyenziswa ngokufanelekileyo ukulawula i-fungus nayo isisombululo sesoda, i-chlorine, i-ammonia, i- boric acid kunye ne-bleach yasekhaya.
Enye indlela eyaziwayo yokulwa nefungus i-hydrogen peroxide, ethengwa kalula kwi-pharmacy. Ikhuselekileyo kwaye yendalo yonyango lwezindonga ezichaphazelekayo ngumbumba, ioli ye-tea, enefuthe elinamandla kwi-antiseptic.
Iindlela ezikhethekileyo zefungus kwindawo yokuhlambela
Ukuba ujamelene neengxaki zokususa i-fungus kwindawo yokuhlambela ngokukhawuleza kwaye ngokusisigxina, ngelixa ungafuni ukuzimela ngokuzimeleyo izicombululo zezinto ezihlukeneyo, unakho ukuya kwiinketho zamakhemikhali asekhaya, ezenziwe kwiivenkile. Indlela yokulwa nefungus ibonakala kwiishalafu kungekudala, zicetyiswa ukuba zisetyenziselwe kuphela i-foci enkulu yesifo, okokuphi iincwadi zokupheka zendalo ezingabhekana nazo. Iindlela ezikhethwa kakhulu zokulwa ne-fungus zi: "I-Antifungus-anti-mold", "Izocid", "Mil Kill", i-antiseptic "Dali" jikelele.
Indlela yokuhlamba izitya ngamandla?
Kunokuhlamba izandla zakho?
Indlela yokuhlamba iibhotile ze-suede?
Indlela yokubilisa ngaphantsi kweengubo?
Indlela yokuhlamba izinto zeeboya?
Ukuhlamba i powder kwiintsana
Indlela yokuhlambulula iphephethi nge-Vanish?
Indlela yokususa i-mercury - iindlela zokucoca ngazo zonke iindwendwe kufuneka ziyazi
Unokuhlamba njani ibhatyi ngaphandle kokuqhawula?
Indlela yokususa iglue kwiingubo?
Indlela yokuhlamba ngaphantsi kweengubo zangaphantsi?
Umtshini kumatshini wokuhlamba - njani ukulahla iindlela ezikhoyo?
Ungayikhupha njani amabala e-greasy kwiingubo?
U-Elizabeth Olsen udibana nomculi uRobbie Arnett
Amagqabhoko aseMgungwini - okuhle nokubi
Ectopia yomlomo wesibeleko
I-Aspen bark - iimpawu zonyango
Emva kokuba izinwele ze-chemotherapy zityhumele ngaphandle-zenzeni?
Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwi-space yimbali okanye inyaniso?
U-Stas Mikhailov waphatheka njani?
Njani isitashi abantwana beembatho zokugqoka?
Isitayela saseSpanish ngaphakathi - iimbono eziyiyolona umdla
Uxinzelelo lokukhulelwa kokuqala
I-Manty - recipe
Uncedo kangakanani i-cottage cheese?
Ukugonywa kwe-influenza - ukuchasene
Isonka se-Indian Flat Paratha - lula ukupheka nokukhonza
Röşti ngeeshizi - isiqwenga saseSwitzerland ekhaya lakho
I-Haircut yobuso obujikelezayo ngo-2015
Iikhukhamba ebusika ngaphandle kweviniga - iindlela zokutya ezilumnandi kakhulu zokulondoloza imifuno
Uncedo lokuqala kunye neenxeba